Ny seranam-piaramanidina amerikana dia mampanantena famerenam-bola ho an'ireo mpandeha izay nolavina ny fidiran'ny mari-pana amin'ny seranam-piaramanidina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny seranam-piaramanidina amerikana dia mampanantena famerenam-bola ho an'ireo mpandeha izay nolavina ny fidiran'ny mari-pana amin'ny seranam-piaramanidina
Androany, Airlines for America (A4A), orinasam-pivarotana indostrialy ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikanina, dia nanambara fa ny mpitondrany mpikambana dia hanome toky an-tsitrapo hamerina ny tapakila ho an'ny mpandeha rehetra izay hita fa manana mari-pana ambony - araka ny famaritan'ny Centres for Disease Control and Prevention (CDC) torolàlana - mandritra ny fizahana fanaraha-maso izay nataon'ny manampahefana federaly alohan'ny dia.
Tamin'ny volana lasa teo, nanambara ny A4A sy ireo mpitatitra ao aminy fa manohana ny fitantanan-draharaha misahana ny fiarovana ny fitaterana izy ireo (TSA) hanomboka hanao fanaraha-maso ny mari-pana ho an'ireo mpiasan'ny tany sy ireo mpiasan'ny mpanjifa raha ilaina izany mandritra ny krizy ara-pahasalamam-bahoaka COVID-19.
Ny fanamarinana ny mari-pana dia iray amin'ireo fepetra ara-pahasalamam-bahoaka natolotry ny CDC eo afovoan'ny areti-mifindra COVID-19 ary hanampy fiarovana fanampiny ho an'ny mpandeha ary koa ny mpiasa fiaramanidina sy seranam-piaramanidina. Ny fanamarinana ny maripana dia hanome fahatokisan-tena ho an'ny besinimaro izay manadanja ny famerenana indray ny fivezivezena amin'ny rivotra sy ny toekarem-pirenentsika. Satria ny fizotran'ny fizahana rehetra ho an'ny besinimaro dia andraikitry ny governemanta amerikana, ny fananana fanaraha-maso ny mari-pana ataon'ny TSA dia hiantohana ny fanaingoana ny fomba fiasa, hanomezana tsy fitoviana manerana ny seranam-piaramanidina hahafahan'ny mpandeha manao drafitra mety.
Fepetra takina amin'ny tarehy
Hatramin'ny nanombohan'ny COVID-19 dia niasa ny fiaramanidina amerikana hiarovana ny mpandeha sy ny mpiasa. Tamin'ny volana aprily dia nanambara an-tsitrapo ireo mpikambana mpitatitra ao amin'ny A4A fa mitaky ny fiasan'ny mpanjifa sy ny mpandeha manarona ny orony sy ny vavany mandritra ny dia izy ireo mandritra ny fisavana, fidirana, sidina ary famotsoran-keloka. Ny herinandro lasa teo, nanambara ireo mpitatitra entana lehibe any Etazonia fa manamafy ny politikany amin'ny endrik'izy ireo izy ireo.
Fanatonana an-tsokosoko amin'ny fanalefahana ny risika
Ny fanaraha-maso ny mari-pana sy ny firakofana tarehy dia ao anatin'ny fomba maro sosona izay ampiharin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mba hanalefahana ny fihanaky ny aretina sy ny areti-mifindra ary hiarovana ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny mpiasa.
Ireo mpitatitra mpikambana ao amin'ny A4A dia mihaona na mihoatra ny torolàlana CDC ary nampihatra ny fikajiana fanadiovana be, amin'ny tranga sasany mba hampidirana ny fomba fanadiovana elektrostatika sy ny fogging. Miasa mandritra ny ora ny mpitatitra mba hanadio ireo kalalao, kabine ary fantsona manan-danja - toy ny latabatra, ny fitsangan-tanana, ny fehikibo, ny bokotra, ny vavahady, ny fitoeran-tànana ary ny lavaka fidiovana - miaraka amin'ireo famonoana otrikaretina nankatoavin'ny CDC. Ankoatr'izay, ny mpitatitra A4A dia manana fiaramanidina manana sivana HEPA ary nampihatra karazana politika - toy ny fidirana ambadika ary ny fanitsiana ireo serivisy sakafo sy zava-pisotro hampihenana ny fifandraisana.
Ny mpandeha rehetra - ny mpandeha sy ny mpiasa - dia ampirisihina hanaraka ny torolàlana CDC, ao anatin'izany ny fanasana tanana matetika sy ny fijanonana any an-trano rehefa marary.
Ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny mpiasa no laharam-pahamehana amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana. Rehefa mijery ny famoahana indray ny indostria misy antsika sy ny fanokafana indray ny toekarena izahay, ireo mpitatitra amerikana dia mijanona amin'ny fifandraisana akaiky amin'ireo maso ivoho federaly, ny Fitantanan-draharaha, ny Kongresy ary ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamam-bahoaka momba ny safidy maro samihafa izay hanome fiarovana fanampiny ho an'ny besinimaro sy mampiorina fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny mpandeha sy ny mpiasa rehefa mandeha izy ireo.